အာဇာနည်မျိုးသေရိုးမရှိ: လာပြန်ပီနောက်တစ်ယောက်... ရုရှပြန်စစ်ဗိုလ်၏ လက်စွမ်းပြချက်
လာပြန်ပီနောက်တစ်ယောက်... ရုရှပြန်စစ်ဗိုလ်၏ လက်စွမ်းပြချက်
ဗိုလ်ကြီး ရဲဇော်သိုက် (ကြည်း) ၃၇၁၅၈
(သိပ္ပံနှင့်တပ်မတော် နည်းပညာတပ် ၊ သပိတ်ကျင်း )
မွေးနေ့ ..... ၂၈ . ၉ . ၁၉၈၆
မိဘအမည် ..... ဦးဆွေဝင်း + ဒေါ်ခင်အေး
နေရပ်လိပ်စာ .... အောင်ချမ်းသာရပ်ကွက် ၊ ရွှေဘိုမြို့ ။
။။။။။။။။။။။။။။။ အရေးယူပေးကြပါ ။။။။။။။။။။။။။။
ရုရှားမှာ ရှိစဉ် က အွန်လိုင်းပေါ်တွင် တိုင်းရင်းသူ မနန်း xxx (အမည်မှန်ကို ဖေါ်ပြရန် မဖြစ်သဖြင့် ချန်လှပ်ရပါသည်) ဆိုသော ရှမ်းအမျိုးသမီး တစ်ဦးနှင့်ချစ်ကြိုက် ပီး ရန်ကုန်ပြန် အရောက် တွင် ယူပါမည်ဟု ဂတိ ပေးပီး အောက်ပါ နေရာများတွင် ကာမ ရယူခဲ့ပါသည်။
၁၃ ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၀၉ မှာ Great ဟိုတယ်
၁၄ ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၀၉ မှာ မြေနီကုန်းက SWEET ဟိုတယ်
၂၁ ရက် ဂျူလိုင် ၂၀၀၉ မှာ ဘရင့်နောင် Green Palace ဟိုတယ်
တိုင်းရင်းသူ အမျိုးသမီးလေး မှာ လက်ထပ်ယူဘို့ပြောသောအခါ ပညာအရည်အချင်း အထက်တန်းမအောင် ၍ ရာထူးမတက်မည်စိုးသောကြာင့် ရှောင်ပြေး
သည်။ ယ္ခု သတင်းကြားသည်မှာ ဗိုလ်ကြီး ရဲဇော်သိုက် (ကြည်း ၃၇၁၅၈) သည် တစ်ခြားမိန်းခလေးတစ်ယောက် နှင့် စေ့စပ် ထားပါသည်...။ သို့ပါသောကြောင့် ကာယကံရှင်
တိုင်းရင်းသူ မိန်းခလေး တစ်ယောက် ၏ နစ်နာမှု ကို နေပြည်တော်မှ အရေးယူပေးပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားအပ်ပါသည် ............. ။
ဒိုင်ယာရီမှတ်တမ်းမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည် ။
6.07.2009 ရက်နေ့ တွင် ရုရှားမှ မြန်မာပြည်ရောက် (ကမ်းရိုးတန်း ပလောမြို့ မှာတာဝန်ကျ )
13.07.2009 မှာ GREAT HOTEL
14.07.2009 မှာ SWEET HOTEL
21.07.2009 မှာ GREEN PALACE HOTEL
02.08.2009 မှာ GREEN PALACE HOTEL
24.08.2009 မှာ SWEET HOTEL
25.08.2009 မှာ SWEET HOTEL
11.10.2009 မှာ DELTA HOTEL
12.10.2009 မှာ GREAT HOTEL
13.10.2009 မှာ GREAT HOTEL
14.10.2009 မှာ GREAT HOTEL
14.03.2010 မှာ အောင်မြင့်မိုရ် ဟိုတယ် (မန္တလေး)
03.07.2010 မှာ အောင်မြင့်မိုရ် ဟိုတယ် (မန္တလေး)
04.07.2010 မှာ အောင်မြင့်မိုရ် ဟိုတယ် (မန္တလေး)
ဆယ်တန်းဖြေဆိုရန် ငွေ လွှဲပေး သည့်ရက် များ
02.08.2010 ငွေ 40000 (လေးသောင်းကျပ် )
04.10.2010 ငွေ 100000 (တစ်သိန်း)
01.11.2010 ငွေ 60000 (ခြောက်သောင်း)
02.12.2011 ငွေ 50000 (ငါးသောင်း )
03.01.2011 ငွေ 90000 (ကိုးသောင်း)
02.03.2011 ငွေ 100000 (တစ်သိန်း)
ငွေပေးပီးနောက် ပိုင်း 15.04.2011 မှစပြီး အဆက်အသွယ် ဖြတ်ရှောင် တိမ်းသွားပါသည်။
ကောင်မလေး က ရှေ့ နေနှင့် ပြောပီး လက်ထပ်ယူပါ ရန် အကြောင်းကြားသောအခါ 09.09.2011 တွင် ငွေ 500000 (ငါးသိန်း) ပို့ ပြီး သူ့ အား မနှောက် ယှက် ပါ နဲ့ ပြောခဲ့ပါတယ် ...
ဗိုလ်ကြီး ရဲဇော်သိုက် ဖုန်းနံပါတ်က 098624986 , 1947105611 ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်ဖုန်းကတော့ 03336524 ဖြစ်ပါတယ်။